Impumelelo ngokusebenzisa iiNgxelo zokuSebenzisa eziZenzekelayo | Martech Zone
Impumelelo ngeeNgxelo zokuSebenzisa eziZenzekelayo
NgoMgqibelo, Novemba 29, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kumsebenzi wam, sisebenzisa lesforce njengesixhobo soLawulo lwaBudlelwane baMthengi (CRM). I-Salesforce yenye yeenkqubo ezintle ezingenza nantoni na, kodwa ngokuqhelekileyo kufuna umgudu ukufika apho.
Enye yeenzame ezinkulu endizibonayo xa i-Salesforce iqhubela phambili ziingxelo ezisebenzayo zokuthengisa ezithunyelwa rhoqo ngenyanga kumsebenzisi ngamnye. Iingxelo zibonelela ngokuqonda kwimimandla yesicelo abayisebenzisa ngokupheleleyo kunye neminye imimandla enokubanceda.
Ingxelo ye-imeyile ezenzekelayo iphela ngamacandelo ama-4:
Ngelixa iqhinga lokuthengisa nge-imeyile koku kungummangaliso, ndifumana iinkcukacha ngaphakathi kwecandelo ngalinye zisilela ekusebenzeni okanye kubelula ukuphunyezwa. Unokuklikha kwisihloko ngasinye kwi-imeyile ukuze ufumane iinkcukacha ezongezelelweyo kwizinto eziboniswayo. Lungiselela, umzekelo, uneengcebiso ezili-15 ngaphakathi kwe-imeyile yam. Uninzi lwezi ngcebiso lunomdla kodwa andinawo amandla okuphumeza ezinye zazo.
Esi sisicwangciso esihle sokuthengisa nge-imeyile endinokukhuthaza wonke umntu kwiSoftware njengeshishini leNkonzo ukuba liphumeze; Nangona kunjalo, ndiza kwenza ezi ngcebiso zilandelayo:
Gcina kulula. Ndingacebisa into enye kwicandelo ngalinye… into enye yokuphumeza, enye yokuqinisa, enye yokwandisa, enye yokwandisa.
Ithuba loshishino. Ngento nganye, ndiza kubonelela ngethuba loshishino okanye ukufundwa kwimeko yomnye umsebenzisi usebenzisa loo nto.
Uqala njani. Ngoku ukuba bayinyusile inzala yakho, ezinye iinkcukacha zonxibelelwano ukuba ngubani oza kulandelelana naye ngoncedo ziya kuba sengqiqweni.
Ngokuzenzekelayo nokwenza isicwangciso sokuthengisa se-imeyile ngolu hlobo, unika abathengi bakho izixhobo zempumelelo. Ukubuya, ukuphunyezwa ngempumelelo kwesoftware yakho kuya kukhokelela kuphuculo lokusetyenziswa kunye neziphumo zeshishini-ithuba elihle lokufumana amathuba kunye nokwanda kokugcinwa kwabathengi. Ukuba usebenzise isicwangciso esizenzekelayo njengale, ndixelele. Ndingathanda ukuva iziphumo!
Inkuthazo yam kwesi sithuba yayinguChantelle Isihlomelo, osandula ukumilisela Ingcebiso ngoSuku imeyile kubaxhasi bayo ukuba bangene. Ngenye indlela, abasebenzisi (okanye nabangengabo abathengi) banokukhetha kwiingcebiso zeMihla ngemihla ngeBlogging kwiShishini kwi-Twitter!
tags: uhlalutyo lomxholoucazululeUkunika ingxelo kwezentlalo
Ngale Veki: Mpelaveki yokuQalisa i-Indianapolis
Novemba 30, 2008 ngo-9: 29 PM
Ndisayikhumbula indlela uHotmail enza ngayo hit enkulu kwiminyaka eli-10 eyadlulayo. Basebenzisa ikhonkco lokutyikitya kuyo yonke i-imeyile yomsebenzisi ukusasaza igama kwihlabathi liphela elibhabha ngokukhawuleza. Ndiqinisekile ukuba ukuthengisa nge-imeyile yindlela elungileyo yokuthengisa kodwa ukuphatha ibhokisi yogaxekile kuya kuba yitalente eyongezelelweyo.
Novemba 30, 2008 ngo-11: 20 PM
Sisebenzise ukuthengisa emsebenzini wam wokugqibela, kwaye ngelixa ndiqinisekile ukuba ukuseta ngokufanelekileyo kunokuba luncedo, ndifumene ujongano lomsebenzisi ukuba lube ngumda ongenakusetyenziswa. Oko kwathiwa, bendingayisebenzisi ukuthengisa, bendiyisebenzisela ukuthengisa. Ngexesha elithile ndingathanda ukubona ukudityaniswa kweCRM kunye nemidiya yoluntu. Oko kunokuba luncedo ngakumbi kum buqu. Idatha ayibobuntu bam bokwenyani. Ndikhetha ubudlelwane.